Njem Iji The Black Forest Germany | Save A Train
Home > Travel Europe > Njem Iji The Black Forest Germany
N'ihi na ndị na amaghị ama, Black Forest bụ oke ọhịa ọhịa dị na ndịda ọdịda anyanwụ Germany. More kpọmkwem, ọ dị na steeti Baden-Württemberg na enyene a ịrịba òkè nke ya.
Ọzọkwa, n'ógbè bụ na ókè-ala na France na Switzerland, ya mere, ọ bụ inweta site ndị mba ndị dị ka nke ọma.
Ke ibuotikọ emi, anyị Aga okwu ọzọ banyere ihe mere na ọ bụ ọnụ ahịa a nleta. Ọtụtụ ihe, anyị ga-agwa gị otú ị iru Black Forest na Germany ụgbọ okporo ígwè.
The Beauty nke Region
Mma nke region idu ke ya agwa, ma ụfọdụ sinik obodo na obodo nta. Ma ọdịdị akụkụ, n'ógbè bụ, ọma, jupụta na ọhịa. Na akụkụ bụ onwe-nkọwa. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ya!
The Black Forest, ma ọ bụ Schwarzwald dị ka ọ na-akpọ na German, nwere ọtụtụ ebe na mara mma panoramic echiche. Ọ na-na-jupụtara pụtara osimiri ndagwurugwu na anwụ na-acha, ọmarịcha ọnụ ọnụ nke ọtụtụ ugwu nta na ị nwere ike ịchọta ebe a.
Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ebe na ike nke na-adọrọ mmasị na ọtụtụ ndị. Ị nwere ike ịchọta udo ezinụlọ ebe, di na nwunye mgbaba, egwu Okirikiri maka ihe adventurous ndị mmadụ.
Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-ahụ n'ógbè ahụ dum ọmarịcha na fairytale-dị ka ihe niile afọ ogologo! Nke ahụ bụ a eziokwu n'ihi na ọ na anya nnukwu mgbe ọ bụ anwụ na-acha, ezo, na mgbe e nwere ihe snow. You nwere ike ịhụ nke ahụ n'ụzọ doro anya na ọtụtụ foto nke ebe.
Olee otú Iru Black Forest site Train
Iru Black Forest site Train bụ ihe i nwere ike ime ọtụtụ ụzọ. Nke ahụ bụ ukwuu n'ime n'ihi na ọnọdụ nke mpaghara na eziokwu na-azụ njem site na Germany bụ mma.
Otú ọ dị, na bụghị ihe niile. Ị nwere ike iru ọtụtụ ebe na mpaghara si fọrọ nke nta ọ bụla akụkụ nke Europe. Nke ahụ bụ eziokwu karịsịa n'ihi isi obodo mba ndị dị ka France, Switzerland, Austria, Belgium, Italy, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ma Germany, ụgbọ okporo ígwè njem e mere mfe dị ka otu ụlọ ọrụ - Deutsche Bahn na-arụ ọrụ ya. Dị iche iche Tragbọ oloko ice, EuroCity, CityNight, Intercity, na TGV edoghi nwere ike-ewe gị ka ọtụtụ ebe na mpaghara. Ị nwere ike ịgba ígwè a ụgbọ okporo ígwè na Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, na Offenburg. Ndị a ụgbọ oloko na-aga site niile isi German obodo, ka ịga na Black Forest ụgbọ okporo ígwè ga-a ikuku.
Ihe ọ bụla ị na-ekpebi ime, ị ga-aga na-ezighị ezi, n'ihi na ịga na Black Forest nwere ike ịbụ a kpokọtara ahụmahụ. Anyị na-ekwu ihe a na-akasị n'ihi na ị nwere ike iji sinik ụgbọ okporo ígwè na-agazu dum mpaghara. Ị ga-enweta ihe ndị kasị mma na-Black Forest nwere na-enye. The Black Forest sinik akara na-arụ ọrụ na-aga Offenburg-Konstanz.
Gaa Leta Black Forest site Train ọ bụla unu chọrọ!
Ka i si hụ, mma nke mpaghara na na mma nke ụgbọ okporo ígwè njem ka a njem a ahụmahụ magburu onwe. Anyị ukwuu nye ndụmọdụ ka ị gaa na ndị kasị kpokọtara ebe nke Germany dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ gị! Otú ọ dị, na njem kwesịrị ogologo ezuru gị iji hụ ihe niile na Black Forest nwere na-enye!
Mgbe ị na-ekpebi na-anyị na a na-enye, na-eche free Kpọtụrụ Save A Train. Anyị nwere ike inyere ị gara na Black Forest ụgbọ okporo ígwè na-esi na a kwesịrị ncheta n'ezie ahụmahụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ohia #blackforestgermany ụgbọ oloko ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem